10 + 5 waxyaabaha xasuusta + 1 magazine - Geofumadas
Sebtember, 2012 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
Ka dib markii uu dhadhanka xun ka tagay kubada cagta ee habeenkii la soo dhaafay iyo guushii ugu ballaarnaa ee deyntii lagu sameeyay, waxaan ka tagay 20 maqaalad si taxadar leh looga soo xulay laba goobood oo aad u xajisan. Waxaan doonayay inaan mowqifka qaboobo, laakiin dhammaadkii waxaan ku faraxsanahay inaan ogaado sida ay u fududeyneyso qiimaha aadka u sarreeya ... taasi waa waxa naagtaydu tidhaahdo!
Kuwa hore u ogaa waxay ogaan doonaan inaan ka hadlayo mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan marka la eego khayraadka isticmaalayaasha kartoonka, gaar ahaan isticmaalka barnaamijka ArcGIS. By habka, ku dhashay Ecuador.
Sida kugula talin, waxaan ka tagayaa maqaalkan 10:
Samee Xirfad 2D oo dhisto 3D Qodobka Subsoil ee ArcGIS
Qeexaan saadaalinta iyo taranka mashruuca ArcGIS
Qalabka COGO ee ArcGIS (sahammo dusha sare ah)
Tababarada ArcGIS 10 ee Isbanishka ee qaabka PDF
Ku dheji xuddunta qaabka laynka ee ArcGIS
Muujiyaan xogta ka soo baxa sahanka sare ee ArcGIS
Qalabka 1935 ee rakibaadda ArcGIS
Ku rakib sanduuqa ku yaala ArcToolbox "Isku duub" gvSIG ee ArcGIS 10
Xisaabi mugga wadajirka ah ee ku soo barbaaray dhulka daadadka leh ee ArcGIS
Kormeerka iyo kormeerka aan la ilaalin ee ArcGIS
Oo haddaydnan lookingaanin, weydii Franz
Tani weli waa goobta ugu da'da weyn iyada oo tirada ugu badan ee isticmaala firfircooni ay ku jiraan forum-yadooda, gaar ahaan fayoobaanta iyo cadastre.
Way adag tahay in la doorto walxaha 10 laakiin halkan kuqorida.
Buug-gacmeedka farshaxanka caadiga ah
Forum of Topography ee Cartesia
V8.200609 version of Geodetic Calculator
MundoGEO magazine ee Spanish
Waxaa hadda la heli karaa si aad u eegto majaladda MundoGEO en Español, taas oo keeneysa wax ka badan sidii indhaha loo marin lahaa mawduucyo xiiso leh sida:
Geotechnology sida qalabka loogu talagalay nidaaminta aqoonta
Isbeddellada Meelaha Macluumaadka Muuqaal iyo Maareynta Macluumaadka Gobollada
Miisaaniyada mashaariicda iyo caqabadaha: magaalooyinka Latin America iyo Kariibiyaanka
Arjiga, dabeecada iyo macnaha guud: mabaadi'da mawduucyada sahanka dhulka
Dabcan, daabacaadda saddexaad ee qaybta "Yaa ku jira qaybta juquraafi ee Latin America" ​​Markaan arko shakhsiyaadka aan ku jirno Waxaan dareemayaa sharaf in lagu xusay qaybtaas.
Post Previous«Previous gvSIG Batoví, qaybinta koowaad ee gvSIG la soo bandhigay for Education
Post Next Koorso bilaash ah, oo loogu talagalay DownloadNext »
3 Waxay u jawaabaan "10 + 5 maqaallo ay ku xasuusiyaan + majaladda 1"
Bulshadu waa sidaas oo kale. Isticmaalayaashu ma dhintaan, waxay ka tagayaan hal barta oo barta kale, markey raadinayaan is dhexgalka.
Waxay u badan tahay in Cartesia ay dib u cusbooneysiisay heerkeeda, maaddaama ay leedahay bulsho daacad ah oo weyn.
Arrinta GabrielOrtiz, muddo sanado ah waxay ahayd goobta calanka sababta oo ah aqoonta waxaa sameeya kuwa xajiya madasha; Waa wax laga xumaado in wax laga beddelo waxa ku jira iyo kor u qaadista diirimaadka sidaas uma fududaan. Mar dambe ma lahan kaqeybgalka isla kooxda, in kasta oo ay ilaalinayso taraafikada soo booqata, dad yar ayaa ka jawaaba.
Dabcan, mudnaanta labada bog waa inay ahaato mid ansax ah, maxaa yeelay waxaa jiray kuwo badan oo la waayey. GabrielOrtiz wuxuu ka yimid 2003, Cartesia oo ka socota 2001. Cidina kama qaadi karto qaswadayaasha.
Roberto Moreno isagu wuxuu leeyahay:
Sida had iyo jeer aad u fiican aad wax ku biirisay, anigu si dhab ah uma ogaan bogga franz, sida ugu wanaagsan ee ku dhow sida geofumadas, waan hubiyay oo waxa uu leeyahay macluumaad sax ah iyo nolol dhabta ah, taasi waa waxa aan jeclahay Franz, badanaa ilaha aan leeyahay Gabrielortiz iyo cartesia, laakiin mahad nagu siinaya in aan ogaano in ay jiraan meelo kale oo leh macluumaad wanaagsan.